Daraasad: Magacaabista Bin Salmaan iyo Booqashada Trump xiriir ayaa ka dhexeeyay.
Monday July 03, 2017 - 20:06:28 in Wararka by Super Admin
Daraasad uu sameeyay markaz ay Yuhuuddu leedahay oo xog ogaal ah ayaa sheegtay in socdaalkii dhawaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku tagay dhulalka Xarameynka uu xiriir la lahaa magacaabista Max'ed Bin Salmaan.
Bin Salmaan oo noqday wasiirkii difaaca ee ugu yaraa adduunka maadaama uu 31 jir yahay, ayaa dhawaan noqday dhaxal sugaha Boqortooyada maamulka Aala Sucuud markii Aabihiis oo ah boqorka hadda uu si lama filaan ah meesha kaga saaray ninkii sida weyn Mareykanka ugu dhawaa ee Max'ed Bin Nayef.
Daraasadda Cusub oo uu baahiyay Markazka Begin-Sadat ayaa qeexday in Madaxweyne Trump uu dhiirageliyay tallaabooyin dhowr ah oo Sucuudigu ku dhaqaaqay ka dib booqashadi Trump, waxaana ka mid ah in Bin Salmaan laga dhigo dhaxal sugaha dalka.
Bin Salmaan ayaa ahaa waqti hore nin saameyn weyn ku leh siyaasadaha maamulka Aala Sucuud isagoo marar badan dibadda ugu baxay socdaallo uu ku matalayay maamulka Aala Sucuud.
Sidoo kale Bin Salmaan ayaa ku caan baxay qorshaha dhaqaale ee "Aragtida 2030-ka" oo boqortooyada Aala Sucuud ay ku dooneyso in ay ku sameyso dhaqaale ay kaga maarmi karto ku tiirsanaanta wax soo saarka Shidaalka.
Sheekh Abuu Usaama "Allaah Ayaa Nagu Guuleeyay Inaan Xirno Meelo Badan oo Uu Wabigu Ka Fatahay" [Wareysi].